Xildhibaan Mohamed Ismacil Shuuriye oo ka hadlay eedaymo loo jeediyay warbaahintana lagu faafiyay.
Dec 7, 2012 (QOL) Xildhibaan Mohamed Ismacil Shuriye oo ka mid ah mudaneyaasha Barlamaanka Somaliya kana soo jeeda Gobolada Jubooyinka ayaa sheegay in laga faafiyay hadalo been abuur ah oo aan sal & raad tooona lahayn, Xildhibaanka oo Warbaahinta Qorahay la soo xidhiidhay ayaa cadeeyay in eedaymo loo jeediyay ay yihiin kuwo aan qabanin isla markaasna aysan waxaba ka jirin.
Xildhibaan Mudane M Shuriye wuxuu ka mid yahay xildhibaanada tirada yar balse tayada leh ee Gobolada Jubooyinka u dhashay sidoo kale wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka sida buuxda dadka Jubooyinka u matala, hadaba Mudane M Shuriye wuxuu sheegay in ay warbaahinta Af-Soomaliga ku hadasha qaar ka mi ah ku been abuuratay isla markaasna lagu tilmamay in uu Jubada Hoose oo kali ah daneeyo isla markaasna uusan Gobolada kale ee Jubaland u laab furnay.
Xildhibaanku wuxuu cadeeyay in aysan waxba ka jirin isagoo intaas raaciyay in dhamaan Gobolada Jubaland ay Gobolada kale ee Soomaliya uu horu markooda isku si u jecelyahay, waxa kale oo xildhibaanku uu sheegay in uu siweyn u aaminsanyahay dastuurka dalka u yaala & waxa uu ka qabo Maamul Goboleedyada wuxuuna sheegay in uu rumaysanyahay in dadka deegaanadda Jubbooyinka ay aayahooda ka tashadaan xaqna ay u leeyihiin wax kasta oo Gobolada kale ee dalku axq u yeeshaan.
Xildhibaanka oo dalka Kenya haatan ku sugan ayaa Magaalada Nairobi si weyn loogu soo dhaweeyey wuxuuna kulmo la yeeshay dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna noqday xildhibaankii ugu horeeyey ee bulshada Juboland qaybaheeda kala duwan la kulmay xiligan oo ay jirto xamaasad Maamul usamaynta Gobolada Juboyinka la xidhiidha wuxuuna xildhibaanku bulshada uu kulamada layeeshay ku biiriyay talooyin & xogo aad muhiim u ah oo ay Dawalad uga baahanyihiin.
Si kastaba ha ahaatee Xildhibaan Shuuriye wuxuu sheegay in uu yahay xildhibaan Soomaaliyeed una taagan danaha guud ahaan shacabka Soomaaliyeed si aad ahana uu ugu adeegi doono wuxuuna intaas raaciyay in uu shacabka Jubaland horumarotooda si weyn diyaar ugu yahay.